We She Me: မြန်မာ ဘလော့ဂ် - ၃၉၀၀
| FLAGS: Myanmar , This Blog
Myo Kyaw Htun - 5/5/08, 2:27 AM
ပြည်တွင်းကသူတွေ ပုံမှန် သတင်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်အလိုက် သတင်းတွေ ဈေးနှုန်းတွေ ရာသီဥတု အခြေအနေတွေ ရေးမယ့် ဘလော့ဂ်တွေလည်း ပေါ်လာရင် ကောင်းမှာပါပဲ။
ဟုတ်တယ် အစ်ကို။ အဲ့ဒိလို ဘလော့ဂ်တွေရှိရင် သိပ်ကောင်းမယ်။
အရေအသွေးကို ပြောတာထက် လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ထောက်ပြပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်အမြင်ပါ
Andy Myint - 5/5/08, 9:16 AM
အခုဟာက စိတ်ဝင်စားလို့ စာရင်းပြုကြည့်တဲ့ သဘောပါ။ ကြုံရင်ကြုံသလိုတော့ ရေးသွားမှာပါ။
Anonymous - 5/19/08, 7:53 PM
ဒီ statistic လေးက စိတ်ဝင်စားဖွယ်း)
Mhaw Sayar - 5/23/08, 5:38 PM
ကို Andy ရေ. ဒီပို့စ် လေးကို ကျွန်တော့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်မှာ အညွှန်းစာစု အဖြစ် သုံးခွင့်ပြု ပါခင်ဗျား။
(မြန်မာ ဘလော့ဂ်တွေ အကြောင်းချည်း သီးသန့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်မှာ သုံးချင်တာပါ။)
Andy Myint - 5/23/08, 11:53 PM
သုံးပါဗျာ။ မှော်ဆရာ ရေးမယ့် ဆောင်းပါးကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်နေပါမယ်။
ဂျစ်ရေ အားပေးတာ ကျေးဇူးပဲ။
မျိုးဝင်းဇော် - 8/4/08, 4:09 PM
ကျေးဇူးဘဲဗျာ ကျွန်တော်ကလူကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာနေရတာ တခြားဘလော့မှာလင့်တစ်ခုတွေ့မှတ်လိုက် နောက်တစ်ခုဆီသွားလိုက်နဲ့ ပင်ပန်းလိုက်တာ ကိုအန်ဒီပိုစ့်ထဲမှာတွေ့တော့ အကြမ်းဖျင်းပြောတယ် မှတ်တာ တောင်ငူသားတောင်းတာမြင်ရော တကယ်ဆိုတာသိရတယ် ကျေးဇူးဘဲဗျာ တောင်ငူသားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Anonymous - 10/12/08, 2:41 AM
ပြတ်သနာက ကိုယ်ရဲ့ ခံစားတာတွေေ၇းချင်တယ်။ how to writeablog i do not know so kindly i want help.
where to find ( teaching blog) please let me know
Anonymous - 10/12/08, 6:49 PM
မေးလိုသည်မှာ-ဘာသာရေးကိုအင်မတန်လုပ်.အလူကိုရက်ရောစွာပေးကမ်း.ဆရာရင်းဖြစ်သောအရှင်ဆန်ဒါဓိကကိုကိုးကွယ်သောတက်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင်ဦးရှိန်ဝင်းသည်တဖက်တွင်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်လူများစွာထိခိုက်ရပါသည်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးတဘက်။အကုသိုလ်တဘက်လုပ်ဆောင်လို့ရပါသလားသိခြင်ပါသည်။ဦးရှိန်ဝင်းphone သည်-281663။099921198
Anonymous - 5/2/09, 6:55 PM
တေဇာ - 1/11/10, 8:26 AM
အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်မှုမှာ စင်းက သိသိသာကြီး သာနေတယ်နော်။ မြန်မာကတော့ အတော်နည်းပါသေးတယ်။ နည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်း အများကြီးကိုး...။
ပို့စ် တချို့ ဖတ်သွားပါတယ်။ စာရေးဟန်က ရှင်းလွန်းလှတယ်။ နားနားကပ်ပြီး ပြောနေသလိုပါပဲ။
Andy Myint - 1/11/10, 11:53 PM
ဟုတ်တယ်ဗျာ ကိုတေဇာ.. ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိတယ်။ (စာရေးပုံကို ပြောပါတယ်)။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရဘူး။ စကားပြောရင် ဒီထက်ပိုဆိုးသေးတယ်။ တည့်ပဲ။
တေဇာ (လရောင်လမ်း) - 7/11/10, 7:16 PM
No Ko Andy! I meant it in positive sense.
Your explicit style of writing's elegant.
Andy Myint - 7/11/10, 11:39 PM
I got it. No worries, Ko Tazar. I anyway welcome advice and response. I kinda like your writing, BTW.